Hevitry Ny Fandikana Nofy | Oktobra 2021
Na bevohoka ianao na tsia, dia mbola afaka manonofy momba ny fiterahana. Tsy isalasalana fa ho hitanao fa manelingelina ny sary hitanao. Mety ho taitra ianao. Mety hitondra fahatsapana tahotra sy alahelo mihitsy aza ianao amin'ny toe-tsainao. Raha bevohoka ianao, ny nofy toy izany dia mety hiteraka fanahiana amin'ny ora fahorianao. Raha ianao [...]
Nofinofy manidina: ny dikan'izy ireo ary ny fomba fandikana azy ireo
Ah, nofy manidina. Matetika fahasambarana & manome hery, nofy momba ny manidina afaka hanaitra ny fihetseham-po nandritra ny taona maro ho avy. Mianara mandika ny nofinao momba ny fanidinana!
Inona no dikan'izany rehefa manonofy momba ny olona maty ianao
Ny manana nofy momba olona iray ho faty dia ny fanandramana sary miaina mazava, tsy hay hadinoina ary tsy mampitony. Mazava ho azy, ity ilay karazana nofinofy fahafatesana izay sarotra ny manala ny tadidinao. Misy antony noho ny nofinofisin'ny olona iray efa ho faty ka tsy milamina. Ny sainao ambonimbony dia mikiakiaka aminao hisarika ny sainao!
Ny dikan'ny zazakely amin'ny nofy: fanontaniana manerantany izany. Amin'ny fotoana maha olon-dehibe antsika dia misy vintana lehibe efa nanonofinofy momba ny zazakely, ny fahaterahana na ny fitondrana vohoka isika. Ka inona no dikan'ny fisehoan'izy ireo? Mizara hafatra lehibe ny tsipika momba ny nofy sy ny sary. Na manan-janaka ianao amin'ny fiainanao mifoha dia mitaona ny tandindona amin'ny nofy. Raha [...]
Nofinofy momba ny olona mifamofo, manambady na misara-panambadiana
Makà sary an-tsaina nofy lalina sy fampahalalana ho an'ny fandikana manokana. Jereo hoe inona no dikan'ny nofy momba ny fanambadiana, ny fofoana ary ny fisaraham-panambadiana.
Ny karazana nofy izay ananan'ny olona dia manana anjara toerana amin'ny fahatakarana ny sary nofinofy izay iainany ary ireo sosona misy dikany iray azo avy amin'ny alàlan'ny dingan'ny famakafakana nofy. Rehefa mandinika ireo karazana nofy dia manomboka mahita modely sy mahatakatra lohahevitra nofy ilay mpanonofy. Ny traikefa amin'ny nofy dia manomboka amin'ny tsara ka hatramin'ny fampitahorana.
Nofy momba ny bibilava - Ny torolàlana feno
Inona no dikan'ny hoe manonofy momba bibilava? Vakio ny nofy momba ny bibilava: ny torolàlana feno amin'ny fandikana ny nofy bibilava. Fakafakao ny nofinofinao, anio!
Nofy momba ny fitondrana vohoka - Ny torolàlana feno
Ka, vao avy nanonofy momba ny fitondrana vohoka ianao… fa miandry… inona izany? Milaza ianao fa tsy bevohoka? Tsia, miandrasa… milaza ianao fa tsy mahazo aina loatra amin'ny fanananao ny nofy satria lehilahy ianao! Aza manahy fa milamina daholo! Ny fanananao nofy hahitanao ny tenanao na olona hafa bevohoka dia tsy fanandramana hafahafa ho an'ny olona [...]
Nofy momba ny fitaka
Ny nofy momba ny fisolokiana dia tsy ara-bakiteny araka ny fahitana azy. Raha eo amin'ny fifandraisana salama ianao, ny nofinofy mamitaka dia mety manondro toe-javatra mitaky ny sainao. Ny tandindon'ny nofy momba ny tsy fivadihana dia zava-dehibe ary mitaky famakafakana. Fotoana hanaovana fikarohana mba hampahafantarana ny tena dikan'ny fahitana anao.
Nofy momba ny hala: Inona no dikan'izany rehefa manonofy momba ny hala ianao
Ny nofinofy momba ny Spider dia mety hampatahotra nefa mety ho fambara tsara ihany koa izy ireo! Ka inona no dikan'izany rehefa manonofy momba ny Spider ianao? Inona no mahagaga raha manenona ny fitomboan'ny fanahinao i Spider? Raha te handika ny nofinao Spider ianao dia vakio ny momba ny Spider amin'ny angano Amerikanina sy ny angano manerantany. Mianara momba ny nofy Spider Web, lainga & fitaka ary maro hafa!
Inona no dikan'izany rehefa manofy olona iray ianao
Ny manonofinofy olona amin'ny nofy amin'ny alina dia fanandramana iray eo amin'izao tontolo izao. Ny olona tsirairay mahatadidy ny nofinofin'izy ireo dia tsy maintsy mahatsiaro farafaharatsiny nofinofy nofinofisin'izy ireo momba olona iray. Ny olona nofinofisin'izy ireo dia mety ho sakaiza, havana, mpiara-miasa na olon-tsy fantatra. Ny olona tsirairay dia manondro marika nofinofy.
Ahoana ny famakafakana ireo nofinofy matahotra ny hianjera
Ny nofy 'nify latsaka' mahazatra afaka manenjika antsika mandritra ny andro maro! Vakio ity torolàlana lalina ity ary ianaro ny fomba handikana sy hamakafaka ny nofy momba ny nify latsaka!
Inona no dikan'ny hoe manonofy momba ny taloha?
Ilay nofinofy mahatsiravina momba ny olon-tianao taloha dia niditra an-tsehatra tamin'ny nofinofisinao tamin'ny alina! Saingy, inona no tadiavin'ny nofy lazaina aminao? Mety hieritreritra ianao fa famantarana ianao fa tsy mihoatra ny fifandraisana farany nanananao. Marina angamba izany. Tsia angamba. Ny fomba tokana hahafantaranao tsara dia ny fikarohana ireo nofinao izay misy dikany miafina.
Mianara mandika ny dikan'ny nofy
Vakio ity torolàlana momba ny DREAM INTERPRETATION MAIMAIMPOANA anio! Mianara mahita ireo sary nofinofy miafina & hamakafaka ny dikan'ny nofy amin'ny nofinao rehetra.
Torohevitra sy teknika manonofy tsy manonofy
Torohevitra manonofinofy Lucid dia ho an'izay mitady hianatra ny fomba hahazoana tombony na fahatsiarovan-tena eo amin'ny tontolon'ny nofy. Ny fampiharana dia tafiditra amin'ny fidirana amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny hybrid. Ny teknikan'ny fampidirana dia manampy amin'ny fananganana toe-tsaina tsy miova sy ny fanekena fa ao anaty zava-misy nofinofy tsy ampoizina na hafa ianao.
inona no tandindon'ny akoho amin'ny zodiak sinoa
trano inona no volana ankehitriny?
manan-danja amin'ny volana Mey
lehilahy libra sy vehivavy libra eo am-pandriana